SARIN'NY FIOMPIANA ALIKA CHIWEENIE - ALIKA
Sarin'ny fiompiana alika Chiweenie
Alika mifangaro Chihuahua / Dachshund mifangaro
Sassy the Chiantaraie amin'ny 6 volana— 'Sassy dia alika kely mavitrika tokoa, izay niara-nipetraka taminay tamin'ny faha-7 herinandro. Manana roa taona 6 izahay Bichon afangaro alika mandefitra fotsiny izy. Tiany misafidy ny vavy . Tena izy mafy loha fa hendry be. Manao izy mitsako amin'ny zavatra rehetra. Nataonay antoka fa manana kilalao fitsakoana be izy. Skiddish tsara tarehy izy hihaona amin'ny olona rehetra, ary mivovo amin'ny olon-tsy fantatra . Tsara ny asany padp puppy -a na eo aza ny poops tadiaviny. (amin'ny karipetra matetika.) Mampiseho fanatsarana izany izy rehefa mihalehibe. Ny toerana tena misy azy dia eo an-tsoroko ... (heveriny fa a saka .) '
'Spots dia volom-borona somary volontany / mavokely Chiweenie. Ny zanako vavy 3½ -– taona dia nanome anarana azy ary rehefa nilaza izy hoe Spots dia hoy aho hoe 'Spot you mean.' Hoy izy: 'Tsia neny ... manana toerana mihoatra ny iray izy!' Toy ny adala aho hoy izy. Spots dia eo amin'ny 5 volana eo amin'ity sary ity ary tena ratsy toetra. Manana angovo eo amin'ny 22 ora isan'andro izy. Sakanany daholo ny zava-drehetra ary ankafiziny indrindra ny fikotrokotroka sy ny fiompy amin'ny karipetra !! Tiany koa ny milalao miafina-mitady rehefa tonga ny fotoana hiasako. Nihantona ny sofiny taloha fa miakatra mandrakariva toy ny an'ny Chihuahua izy ireo. Ny vatany dia mitovy amin'ny an'ny Dachshund. '
Nestle, Chiantaraie amin'ny 11 volana— 'Nestle (Chiweenie lava volo) tia miambina eo am-baravarankely. Tiany ny manimbolo ny rivotra rehefa misokatra ny varavarankely ary 'hanondro' rehefa mandalo ny olona. Tena hitanao amin'ity sary ity ny halavany ho an'ny Chiweenie! '
Nestle ilay Chiweenie lava volo (hybrid Dachshund / Chihuahua lava) amin'ny 11 volana- 'Tena miavaka izy! Fotoana vitsy talohan'ity sary ity dia nampiasainy ho toy ny napkin ny fandriana, toy ny fanaon'ny ankamaroan'ny alika! Ny sofiny dia mazàna mahazo static be, araka ny hitanao amin'ity sary ity! '
Frankie the Chiantaraie amin'ny faha-4 taonany— 'Ry zanako malalako sofina!'
'Ity no Chiantaraie Taffy antsika. Dachshund ary antsasaky ny Chihuahua izy. 1 taona izy, ary mpamonjy trano fialofana. Tony i Taffy, nanaiky, nanaja sy be fitiavana. Saro-kenatra amin'ny olona vaovao izy, saingy tsy dia mivily! Tiany ny milentika eo amin'ny tokonam-baravaranay, ary matory eo akaikinay akaiky indrindra araka izay azony atao. Milamina izy nefa mihaino tsara. Tena mankafy azy mandeha isan'andro miaraka aminay. Nampiasainay tamin'ny fomba mahomby ny sasany amin'ireo teknikan'ny The Dog Whisperer hampiofanana azy. Mianatra haingana izy. Mifanaraka tsara amin'ireo saka 2 (izay lehibe kokoa noho izy!). Tsy mila fikojakojana afa-tsy ny fanasana indraindray. Tsara ity alika ity! '
Taffy the Chiantaraie, Dachshund ary ny antsasaky ny Chihuahua, eo afovoany dia misakafo miaraka amin'ny saka saka saka roa
Taffy the Chiweenie, Dachshund ary ny antsasaky ny Chihuahua, eo amin'ny sezalava
'Ity no Chiweenie Sham Wow-nay! (Sham fotsiny no iantsoanay azy.) Noraisinay avy amin'ny toeram-pialofana biby teny an-toerana izy tamin'izy 10 herinandro teo ho eo. Nentina tamin'ny tompony tany am-boalohany izy satria nanana biby betsaka kokoa noho ny navelan'ny lalàna momba ny tanàna io olona io. Tsapanay fa ny fialofana dia namonjy alika kely sy alika kely kely am-polony hafa avy tao an-tranon'io olona io. Maro amin'izy ireo no tao anatin'ny toe-javatra ratsy - rakotra parasy , maloto sy tsy voadio, fa na eo aza ny tontolo ratsy niainany dia mbola sariaka sy ara-tsosialy izy ireo.
Herinandro teo ho eo taorian'ny nitondranay an'i Sham nody dia narary mafy izy, ary saika namoy azy izahay. Nanome vaksiny azy ilay toeram-pialofana, saingy efa tara loatra izy io mba hisorohana azy tsy hahita trotraka. Niasa mafy ny mpitsabo biby mba hamonjy azy sy hanampy azy hihatsara, saingy nandritra ny herinandro vitsivitsy dia tsy noheverinay fa hahavita azy izy. Azo antoka fa mpiady i Sham - sitrana tamin'ny aretina izy, saingy mampalahelo fa tsy nanam-bintana toy izany ny sasany tamin'ireo mpiara-dia aminy. Ilay distemper koa dia niteraka kitrokely maharitra teo amin'ny tongony havia, ka 'nibolisatra' foana sy ambany izy rehefa nijoro.
'10 volana izy izao, ary alika' tanora 'somary mena volo, feno hafanam-po ary fatra! Ankoatra ny twitch amin'ny tongony dia tsy ho fantatrao mihitsy fa narary izaitsizy izy.
'Ankehitriny izy dia zatovo salama Dachshund / Chihuahua mifangaro, izahay dia miasa mafy mba hahazoana antoka fa tsy ho lasa izy mpanjakan'ny trano . Izahay dia mijery hatrany ny The Whisperer Alika amin'ny fotoana rehetra — Ny torohevitr'i Cesar dia nahagaga niaraka tamin'ny Beagle (ary fantatsika daholo ny mety ho vokatr'ireo Beagles ireo!), Ka izao dia ataontsika izay hahatonga an'i Sham ho 'alika mahay mandanjalanja' koa.
'Miezaka ny hizara ny tantaran'i Sham matetika araka izay tratra aho noho ny antony roa. Voalohany, hanampiana hanakivy ny olona tsy hividy amin'ny alika kely na ny mpiompy hafa tsy azo iadian-kevitra. Mino aho fa ny tompony tany am-boalohany dia mety nampiasa ireo alika kely rehetra ireo tamin'ny fiompiana zanak'alika. Mazava ho azy fa tsy afaka nikarakara azy rehetra tsara ny tompon-trano, ary mampalahelo fa maro amin'izy ireo no maty vokatry ny aretina sy ny tontolo iainan'ny katsentsitra. Faharoa, hamporisihana ny olona hanao vaksiny ny alikany ary hitazomana hatrany ny fanaovam-baksiny! Canine Distemper dia aretina mahatsiravina - ny alika dia tsy miaina matetika, ary mijaly noho ny fahasimbana ara-batana tsy azo eritreretina rehefa mandeha ny aretina. Azafady, aza atao atahorana ny hahavery ilay naman'ny mpianakavinao malalany — aza hadino ny manao vaksiny !! '
'Ilay bandy mena kely (ankavanana) dia i Chiweenie, Bentley, izay voavonjy. 6 taona izy ary ny alika tsara indrindra nananako! Ny zazavavy kely (havia) dia ny rahavaviny, Sookie ary madio izy Chi . Nahazo azy izahay fony i Bentley 3 taona ary tsy afa-misaraka tanteraka izy ireo! Izy ireo dia ilay mpivady mampihomehy ary nifanampy tamin'ny filan-dratsy kely ananan'izy ireo. Efa nanana aho Doxies ny fiainako iray manontolo sy ny fahitako an'i Chiantaraie dia tsara kokoa noho ireo Doxies tiako rehetra! Ho an'ny alika kely kokoa, mahafinaritra izy ireo, snuggley, ary manana fiaretana tsara ho an'ny hetsika ivelany izy ireo. Tsy nanana olana aho fiofanana vilany izy ary isaorana ny rahavavaviny, tiany izao ny fiara! Nahazatra ny nitondra fiara izy mandra-pahatongantsika ary nasehony azy fa mahafinaritra ny mitaingina fiara! Ny hany quirk-ny dia izy petrified ny afomanga fa toy izany koa ny rahavaviny! TIA ny sakaizako kely ary hanome soso-kevitra amin'ny Chiarahanie ho an'iza aho! '
Chalupa the Chihuahua / Dachshund mix (Chiantaraie) amin'ny 8 volana
Gus the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie) amin'ny 9 volana— 'Ity sary ity dia tena mampiseho an'i Dachshund ao aminy.'
Gus the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie) amin'ny 6 volana
Gus the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie) amin'ny 2 volana
'PJ, Chiantaraie niverina rehefa' mpitovo '(tsy misy alika hafa ao an-trano) tamin'ny faha-11 taonany, nandry teo amoron-drano taorian'ny fisitrihana.'
CoCo the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie) - 'Ny reniny dia volo volontany kely Dachshund ary efa lava volo ny dadany Chihuahua . '
PP the Chiantaraie amin'ny faha-6 taonany— 'PP dia tena marani-tsaina, mamy ary be fitiavana. Ham sy fromazy no sakafo tena tiany. Alika anaty trano tanteraka izy. Tena mora nampiofana potty, nandeha tamin'ny gazety na tany ivelany. Miara-matory amiko isan-kariva izy. Tsy hanana fomba hafa aho. Izy no alika tsara indrindra hatramin'izay! Tian'i PP ny misolelaka! '
Batman the Chiweenie toy ny alika kely amin'ny 4 1/2 volana— 'Batman dia zanaky ny zana-drahavavavavaviko vavy. Nifangaro tamin'ilay raim-pianakaviana Dachshund SY Chihuahua . Nentiko niverina avy tamina fianakaviana iray izay tsapanay fa tsy nanome azy ny fiheverana ilainy . Ka somary nahay izy. Fa rehefa afaka iray andro monja dia mifandray amiko izy, tsy afaka mivoaka ny efitrano miaraka aminy. Lavitra ny lavitra, saingy nahazo fotoana sy faharetana aho. '
Batman the Chiweenie toy ny alika kely amin'ny 4 1/2 volana
'Ity no Chiantaraie ahy amin'ny taona 1 sy sasany. Hercules no anarany. Hitanay tao amin'ny tranon'ny mpifanila trano taminy izy. Ny ankizy izay nanana azy tamin'izany dia nisambotra azy tamin'ny rambony ary nanipy azy tany an-tokotany. Narary ara-bakiteny izahay nijery. Avy hatrany dia niresaka tamin'ny rain'ny ankizy izahay mba hampandre azy ny zava-mitranga. Gaga aho fa tsy niraika izy ary nanontany raha te-hividy ilay zanak'osy aminy izahay. Tena tsy nanantena an'izany valiny izany na hanana alika izahay. Nieritreritra azy vetivety izany, saingy tsapantsika fa raha tsy nanao an'io isika dia hijaly kokoa ilay alikakely mahantra. Nentinay nody ilay tovolahy kely tamin'io alina io. Efa ho herintaona izao ary mbola tsy sambatra izy. Mifankahazo tsara amin'ny saka malalako roa sy ilay mpiandry ondry Aussie vaovao aho. Teo amin'ny toerana nety izahay tamin'ny fotoana mety. Azonao atao ny milaza fa fitahiana miafina i Hercules. '
Hercules ilay Chiantaraie matory miaraka amin'ny saka
Chewbacca the Chiweenie amin'ny faha-6 taonany— 'Chewie dia be fitiavana, tsy mivadika, mavitrika, tia milalao ary tena hendry. Tiany ny mandeha amind milalao, milalao amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny taona 6taona monja dia ny quirk fotsiny dia, rehefa any an-tranon'olona iray hafa isika, dia tsy maintsy ao anatin'ny 6 ft azy aho rehefa tonga ny fotoana hihinanany. Hijery izy mba hahazoana antoka fa eo aho. '
Chewbacca the Chiweenie amin'ny 6 taona nilalao tao amin'ny piscine splash.
Chewbacca the Chiantaraie ho alika kely miaraka amin'ny kilalaony
Chewbacca the Chiweenie amin'ny maha alika kely azy
Chewbacca ilay zanak'alika Chiantaraie, aseho eto amin'ny 7 herinandro miaraka amin'ny kilalaony. Feno hery izy.
'Bernie dia Chiantaraie 10 taona. Tena be fitiavana izy ary tafavoaka velona. Nanafaka azy tamin'ny iray tamin'ireo mpianatro aho. Dadabe saika handeha hanipy azy any anaty rano! Nentiko nody izy ary nokapohina hatrizay. Tafavoaka tamin'ny fanafihan'ny alika roa i Bernie, a Doberman ary a Rottweiler . Tiany i Oscar 'rahalahiny' kely, a Dachshund . '
Bella the Chiantaraie (Chihuahua / Dachshund hybrid) amin'ny 10 volana
Rosey the Chiweenie amin'ny taona 1 (hybrid Chihuahua / Dachshund)
Cody the Chiantaraie (Chihuahua / Dachshund mix dog) amin'ny herintaona— Alika be fitiavana i Cody. Izy dia manana angovo be ao amin'io vatany kely io. Notaritariny aho isaky ny mandeha mitsangatsangana izahay. Eto amin'ity sary ity dia nasaiko nipetraka i Cody mba hahafahako maka ny sariny ary tsy mahafatifaty ve izy? Tiako ny mirehareha momba ny alikako. '
Manantena ny fifangaroan'ny Chihuahua / Dachshund (Chiantaraie)
Jerry, hybrid Chihuahua / Dachshund (Chiantaraie) 14 volana, hoy ny tompony, 'Tena be herim-po izy ary haingana noho ny habeny ny zavatra tiany indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny mankany amin'ny valan'alika ary manenjika ireo alika izay manenjika baolina, na dia avo roa na telo heny noho izy aza! Tiany ny ankizy ary manantona azy ireo foana izy hanao hiarahaba azy, fa raha ny olon-dehibe hatrany dia manana ny tiany izy ary ny olon-kafa rehetra dia tsara ho an'ny fofona na roa fotsiny. Clown kely tena faly izy ary tiako izy. '
CoCo the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie) amin'ny maha alika kely an'i Luigi, fifangaroana Dachshund / Chihuahua (Chiantaraie) efa lehibe
CoCo the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie) amin'ny maha-alika kely - ny reniny dia volo volontany somary kely Dachshund ary efa lava volo ny dadany Chihuahua .
CoCo the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie)
Roscoe the Chiantaraie puppy
Penny the Chiweenie amin'ny 12 herinandro (Dachshund / Chihuahua mifangaro alika kely)
omby alika Labrador retriever Mix
sarina zanak'alika mifangaro pit pit
boxer sy bulldog afangaro alika kely
pyrenees / mpiandry ondry anatôlianina lehibe
alika mpiady totohondry mifangaro pitbull